Nin ganacsade ah oo lagu dilay B/weyne iyo dhalinyaro badan oo loo soo qabtay dilkaas – Bulshoweyn.com | Your Source Of News And Entertainment
Nin ganacsade ah oo lagu dilay B/weyne iyo dhalinyaro badan oo loo soo qabtay dilkaas
Wararka naga soo gaaraya gobolka Hiiraan ayaa sheegaya in ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya ay saakay howlgalo culus ka wadaan xaafada H/wadaag ee magaalada B/weyne, halkaas oo xalay lagu dilay nin ganacsade caan ah.
Koox hubeysan ayaa la sheegayaa in habeenkii xalay ay toogasho ku dileen nin lagu magacaabi jiray Ibraahim Cismaan Muumin, oo hore ula shaqeyn jiray hay’ad NGO oo lagu magacaabo Goobaalle.
Kooxihii dilka u geystay ganacsadahaasi ayaa goobta isaga baxsaday kadib markii ay falka dilka ah fulliyeen, waxaana markii dambe goobtaasi soo gaaray ciidamada dowladda oo howlgalo baaritaano ah halkaasi ka fulliyay.
Allaha u naxariistee Ibraahim Cismaan Muumin ayaa la sheegaya in markii la dilaayay uu ku sugnaa goobtiisa ganacsi oo ku talla xaafada H/wadagaan ee magaalada B/weyne.
Dhinaca kale, ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa saakay aroortii howlgal culus ay bilaabeen, waxay kusoo qab-qabteen in ka badan 50 qof oo dhalinyaro ah, kuwaas oo haatan baaritaano lagu haayo.
Dhalinyaradaasi ayaa ah kuwa looga shakisan yahay inay wax ka ogaayeen dilka loo geystay Marxuum Ibraahim Cismaan Muumin, oo ahaa nin ganacsade si weyn looga yaqaanay magaalada B/weyne.
Xaaladda goobtii uu dilka ka dhacay ayaa ah mid aad u degan, marka laga reebo howlgalada ay ciidamada dowladda haatan ka wadaan halkaas, iyadoo goobihii ganacsi iyo isku socodka gaadiidka ay yihiin kuwo si caadi u shaqeeynaya.